Hayat Eve SÄ±ÄŸar Apk 2022 Download Ho an'ny Android - Luso Gamer
Hayat Eve SÄ±ÄŸar Apk 2022 Download Ho an'ny Android
Aprily 6, 2022 Janoary 20, 2022 by John Smith
Maneran-tany dia mikorontana ny rehetra ary matahotra olana corona. Na ny ankamaroan'ny firenena matanjaka indrindra eto an-tany aza dia nijaly noho ity virus ity. Rehefa dinihina ny olana dia nanapa-kevitra ny governemanta Tiorka fa handefa ity fampiharana finday fantatra amin'ny anarana hoe Hayat Eve SÄ ± ÄŸar Apk ity.
Ny antony lehibe amin'ny fampivoarana ity android ity Fampiharana ny areti-mifindra dia ny fifandraisana mivantana amin'ny olona. Ary zarao ny vaovao farany momba ity virus ity. Na dia efa nanao ezaka tsara aza ny governemanta Tiorka mba hamahana ilay olana.
Na ny departemantan'ny fahasalamana aza manorina an'ireny hopitaly marobe ireny hanoherana ny olana. Saingy mbola mijery ny sisa amin'ny mponina ny governemanta. Ahoana ny fomba hisakanan'ny governemanta fiarovana sy hiarovana ny olony tsy misy fanafody antidot.
Na dia tsy misy firenena manana Anti Dot mandraka ankehitriny. Saingy ny fepetra malina amin'ny alàlan'ny ahafahantsika manala sy manakana ny olona tsy voan'ny virus. Ny zavatra roa lehibe dia ny saron-tava sy saniterers ka anisan'izany ny halaviran'ny olona tsirairay.
Raha jerena ny fepetra tokony hitandrina, ny governemanta Tiorka dia nanome baiko ny sampana fahasalamana mba hamoaka ny fampiharana vaovao. Amin'ny alàlan'ny firesahan'ny fanjakana mifampiresaka mora sy mifandray mivantana amin'ny olona. Mba hampitaina ny fivoarana farany ary hifandraisa mivantana amin'ireo mpandray anjara.
Ankoatr'izay ao amin'ny App Hayat Eve SÄ ± ÄŸar, nanampy ireo Google Map ireo. Ao anatin'ilay sari-tany dia ho hitan'ireo mpampiasa ireo teboka mena misy loko samihafa ireo. Izay manondro mazava ireo olona voakasik'izany, anisan'izany ireo olona ahiahiana.
Bebe kokoa momba ny Hayat Eve SÄ ± ÄŸar Apk
Ny tanjona voalohany amin'ny fampivelarana ity fampiharana android ity dia ny fisorohana ny fisarahana amin'ny COVID. Ary arovy ny olona tsy ho voan'ny areti-mifindra miaraka amin'ny zokiolona. Mba hidirana amin'ny endrik'ity fampiharana ity, ny mpampiasa dia mila mampiditra sy manolotra ny nomeraon-telefaonany.
Vantany vao miditra ny nomeraon'ny findainao ilay mpampiasa dia mandefa ny hafatra OTP ho fanamarinana ny mpampiasa. Aorian'ny fametrahana ny kaody fanamarinana dia hanome fidirana mivantana amin'ny dashboard ny fampiharana. Aiza no hahitan'ny mpampiasa safidy safidy hafa ao anatin'izany ny fisehoana bara fampilazana
anarana Hayat Eve SÄ ± ÄŸar
Developer TR Ministeran'ny fahasalamana
Anaran'ny fonosana tr.gov.saglik.hayatevesigar
Ny endri-javatra lehibe atolotry ny fampiharana dia ny Scan The QR Code, Health status, HES Code Procédure, Request Mask ary Stats ankehitriny. Ny endri-javatra tsirairay dia maneho ny safidy sy torolalana samihafa. Aoka hatao hoe raha misafidy ny QR Code Scan ianao dia afaka manamboatra fifandraisana amin'ny telefaona hafa.
Ny safidy ara-pahasalamana dia hanolotra torolàlana. Aorian'ireo torolàlana ireo dia ahafahan'ny mpampiasa mamantatra sy mitsara ny toe-pahasalamany. Na dia tsy azo antoka ny fomba fiasa, fa mandeha tsara izy io.
Ho fanampin'izay fangatahana saron-tava dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa saron-tava maimaimpoana maimaim-poana amin'ny varavarana trano. Ny safidy stats amin'izao fotoana izao dia hanampy ny mpampiasa hizaha sy hamakafaka ny toe-javatra amin'ny sehatra manokana. Na dia ny manamarina ny toe-javatra ankehitriny aza ao amin'ny faritra misy anao mampiasa ny fampiharana.
Ny fampiharana dia manolotra endri-javatra marobe ao anatin'izany ny QR Scan Option.
Amin'ny alàlan'ny QR Scan dia ahafahan'ny mpampiasa manorina fifandraisana ary mandoa volavolan-dalàna amin'ny Internet.
Satria ny fandoavam-bola tena izy dia mety manampy ny fisarahana ilay virus.
Ny fangatahana Mask fangatahana dia ahafahan'ny mpampiasa mandefa saron-tava amin'ny Internet.
Hahita sy hampiseho ny toe-javatra misy ankehitriny ny GPS.
Aseho ao anaty lahatsoratra ny rohy mampifandray ny Apk.
Ny fisoratana anarana amin'ny fampiharana dia tsy maintsy takiana.
Ahoana no fampidinana sy fametrahana App
Noho izany, ny dingana fametrahana ny Apk File dia somary sarotra. Aza manahy momba izany satria nanome ny dingana rehetra ilaina eto izahay. Alohan'ny hanombohantsika ny fametrahana sy ny fampiasana ny Apk File. Ampidino azafady ny kinova farany an'ny Hayat Eve SÄ±ÄŸar Apk eto.
Izay azo tratrarina azo alaina eto miaraka amina fika iray download. Raha vantany vao vita ny fampidinana ny Apk File, araho ny fepetra eto ambany hananganana malefaka sy ny fampiasana ny fampiharana.
Aorian'izany dia mandehana any amin'ny menio findainao ary manangana ny fampiharana.
Misoratra anarana miaraka amin'ny fampiharana mampiasa ny laharan'ny findainao.
Raha manamarina azafady ampidiro ny hafatra OTP.
Noho izany dia mihena tsy tapaka ny tranga. Na izany aza, tsy afaka mamela tady mivaha izahay. Raha any Tiorkia ianao dia manoro hevitra anao izahay mba hisintona ny Hayat Eve SÄ±ÄŸar App nohavaozina avy eto. Raha sendra olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, Fahasalamana & Fitness Tags Hayat Eve SÄ ± ÄŸar, Hayat Eve SÄ ± ÄŸar Apk, Hayat Eve SÄ ± ÄŸar App, App momba ny areti-mifindra Post Fikarohana
Samsung Health Monitor Apk Download ho an'ny Android 
FB Detective Apk Download 2022 Ho an'ny Android